Ciidanka dowladda oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Gobolka Hiiraan | dayniiile.com
Home WARKII Ciidanka dowladda oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Gobolka Hiiraan
Ciidanka dowladda oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Gobolka Hiiraan
Gudoomiyaha Maamulka Gobalka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa maalintii labaad Hoghaaminaya howlgal ka dhanka ah Al-Shabaab , kaas oo Ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya ka wadaan dhulka howdka ah ee kuyaalla inta u dhaxeeysa degmooyinka Matabaan iyo Magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa sheegay in ujeedka howlgalka ugu weyn uu yahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa degaannada ay kaga sugan yihiin Gobolka, waxaana howlgalka qeyb ka ah Saraakiisha Ciidamada Qalabka sida oo u Hoggaaminayo Taliyaha Guutada 5-aad qeybta 27-aad ee Ciidanka xooga Dalka Soomaaliyeed Korneyl Maxamuud Xasan Ibraahim Baakay iyo Taliyaha Qeybta Booliska Gobalka Hiiraan Col isaaq Cali Cabdulle.
” Si Shacabka looga dulqaado haraadiga Al-Shabaab Maamulka Gobalka Hiiraan waxuu Juhdi badan ku bixinayaa sidii Dadka iyo deeganka looga xureeyn lahaa laguna soo celin lahaa xasiloonidii iyo horumarkii ay laha!yeen Shacabka ayaa yiri” Guddoomiye Jeyte.
Sidoo kale Gudoomiyaha Gobalka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa Carabka ku adkeeyey sida ay muhiimka u tahaty in la helo amni lagana Adkaado Al-Shabaab si Shacabka ay u helaan kalsooni iyo adeeg dowladnimo, isla markaana howlgallada ay sii socon doonaan.
Next articlePuntland oo gacanta ku dhigtay Rag Ajaajib ah oo dadka tahriibin jiray
Ku dhowaad 20 musharax oo isu diiwaangeliyey doorashada madaxweynaha Soomaaliya
Maamulka G/Banaadir & laamaha Amniga oo ka shiray sugida Amniga Maalmaha...
Gudoomiyaha KMG Golaha Shacabka Dhabancad ayaa Xildhibaanada ugu baaqay in ay...
Dad si sharci daro ah ku galay Britain oo dib loogu...